WKG - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း > အဆိုပါ WCG ပြန်ရှာနေ
ဟားဘတ်ဒဗလျူအမ်စထရောင်းသည် ၁၉၉၆၊ ဇန်နဝါရီလတွင်အသက် ၉၃ နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ထောင်သူသည်ထူးခြားသောစကားပြောခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းစတိုင်ဖြင့်ထူးခြားသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည်လူပေါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်အားသူ၏ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ထုတ်ဝေရေးအင်ပါယာတစ်ခုအတွင်းသို့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတစ်နှစ်လျှင်လူ ဦး ရေ ၁၅ သန်းကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
မစ္စတာအမ်းစထရောင်း၏သင်ကြားမှုကိုအလေးအနက်ထားသည်မှာသမ္မာကျမ်းစာသည်အစဉ်အလာများထက်အခွင့်အာဏာများစွာရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် WCG သည်အခြားသောချာ့ချ်များ၏ဓလေ့ထုံးစံများနှင့်မတူသည်မှာသူ၏ကျမ်းစာကိုသူ၏အနက်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုလက်ခံခဲ့သည်။
မစ္စတာအမ်းစထရောင်းကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားကျောင်းသည်သူသင်ပေးသကဲ့သို့သမ္မာကျမ်းစာကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူအရင်သင်ပေးခဲ့တဲ့အဖြေတွေနဲ့မတူတဲ့အဖြေတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်။ နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။ နောက်တဖန်ငါတို့သည်ကျမ်းစာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာငါတို့အတွက်အသစ်တစ်ခုအစဖြစ်တယ်။ မလွယ်ကူလှပါ။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တွင်အယူဝါဒအမှားများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြင်ဆင်ချက်များနှင့်ရှင်းလင်းချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်သောထင်မြင်ချက်ကို preaching ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းနှင့်သွန်သင်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
အခြားခရစ်ယာန်များကိုမပြောင်းလဲသောသူဟုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဟုခေါ်ကြသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေ၊ ငါတို့ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်အားလုံးနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ငါတို့တစ်ချိန်ကငါတို့အတွက်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးရသည့်ဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်“ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်သို့” ထပ်ခါထပ်ခါခုန်ခဲ့ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်? အကြောင်းမှာအမှန်မှာ၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများထက်သာလွန်သောအခွင့်အာဏာရှိသည်။
အယူဝါဒပြောင်းလဲမှုများသည်ပြီးစီးရန် ၁၀ နှစ်ခန့်ကြာခဲ့သည် - ၁၀ နှစ်ရှုပ်ထွေးမှု၊ ကြီးမားသောပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိပြီးဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းသားအများစုအတွက်အဆိုးရွားဆုံးသောအပြောင်းအလဲမှာလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လေ့လာခြင်းသည်သတ္တမနေ့ဥပုသ်နှင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများကိုဘုရားသခင်ကလိုက်နာရန်မလိုတော့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲအဖွဲ့ဝင်များစွာကဒီကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ သူတို့သည် အကယ်၍ ရွေးချယ်ပါကဥပုသ်စောင့်ရန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြသော်လည်းလူအများက၎င်းကိုစောင့်ထိန်းရန်မလိုအပ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြပါ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘုရားကျောင်းမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ ချာ့ချ်၏ဝင်ငွေသည်နှစ်နှင့်ချီ။ ကျဆင်းခဲ့ပြီးအစီအစဉ်များကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့သည်။ ချာ့ချ်သည်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းအရေအတွက်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။
အသင်းတော်တစ်ခုစီကိုလည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အများစုတွင်အခမဲ့အလုပ်လုပ်သောသင်းအုပ်ဆရာအသစ်များရှိသည်။ ၀ န်ကြီးဌာနအသစ်များပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ အဆင့်များစွာအဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးအသင်းသားများသည်ဒေသခံရပ်ရွာလူထုများ၌ပါ ၀ င်နေစဉ်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သူများပြားလာသည်။ ရပ်ရွာကောင်စီများသည်အစီအစဉ်များရေးဆွဲရန်နှင့်ဘတ်ဂျက်ဆွဲရန်အတွက်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်သင်ယူကြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်အသစ်သောအစဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေလို။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတောအုပ်များ၊ ချောက်ကမ်းပါးများနှင့်ပြင်းစွာစီးဆင်းနေသောမြစ်များကိုဖြတ်သန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရှစ်နှစ်ခန့်ကရုံးခန်း၌ရုပ်ပြောင်တစ်ခုသတိပေးခဲ့သည် - ဌာနတစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံး ၀ န်ထမ်းသည်ထိုရုပ်ပြောင်ကိုနံရံပေါ်တင်လိုက်သည်။ ၎င်းတွင် roller coaster တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်မျက်လုံးကျယ်။ လူတစ် ဦး ထိုင်လျက်သူတို့၏တန်ဖိုးရှိသောဘဝအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့်ထိုင်ခုံတွင်တွယ်ကပ်နေခဲ့သည်။ ကာတွန်းအောက်ရှိခေါင်းစဉ်မှာ“ ရထားစီးနင်းမှုမပြီးဆုံးသေးပါ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တကယ်မှန်ကန်လိုက်လေခြင်း! ငါတို့ဘဝအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်။
ယခုမူကားငါတို့အထူးသဖြင့် Pasadena ဂုဏ်သတ္တိများရောင်းချခြင်း၊ Glendora သို့ငါတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများကိုသူတို့၏ဘဏ္finာရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတာဝန်ယူစေသည့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူတောအုပ်မှထွက်လာပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်၏သဲလွန်စများကိုရှင်းလင်းပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုယေရှုခေါ်တော်မူသောလုပ်ငန်းတော်၌အသစ်သောအစပြုခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၈ ခုငါတို့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး၊ အသင်းတော်အသစ် ၈၉ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်၎င်းကိုလူတိုင်းအတွက်အသစ်သောအစပြုခဲ့သည် - ထိုခရီးသည်အမြဲတမ်းချောမွေ့။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှည့်အပြောင်းများ၊ မှားယွင်းသောစတင်မှုများနှင့်အလှည့်အပြောင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကြွယ်ဝမှု၏ကြိမ်များနှင့်အကျပ်အတည်းကာလရှိခဲ့တယ်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်များသောအားဖြင့်ဆင်တူသည် - ပျော်ရွှင်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ သုခချမ်းသာနှင့်အကျပ်အတည်းကာလများရှိသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်နာမကျန်းမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုတောင်များနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများမှတစ်ဆင့်လိုက်လျှောက်ကြသည်။